Nahoana ianao no tsy tokony handinika ny Mercury
Ny mercury no metaly tokana izay manify amin'ny hafanan'ny efitra. Na dia nesorina tao amin'ny ankamaroan'ny thermomètre aza izy, dia mbola hitanao any amin'ny toeram-pitsaboana sy ny jiro fluorescent .
Tsy azo antoka mihitsy ny mikasika ny moka. Haheno anao ny zokiolona hilaza aminao ny fomba nampiasana azy matetika mba hampiasana mikanisa mafana ao anaty labs ary hamafisina azy amin'ny rantsantanana sy pensilihazo. Eny, niaina izy ireo hizara ilay tantara, saingy mety ho nijaly noho ny fahasimbana nateraky ny neurologique izy ireo vokatr'izany.
Ny mercury dia mibontsina avy hatrany eo amin'ny hoditra, miaraka amin'ny fanerena haitraitra avo dia avo, noho izany dia mamoaka ny metaly ao anaty rivotra ny mason-koditra misokatra. Miantehitra amin'ny akanjo izy ary mipetraka amin'ny volo sy ny fantsika, noho izany dia tsy te hanongotra azy amin'ny rambony ianao na hokosehina amin'ny lamba.
Ny Mercury dia misy fiantraikany eo amin'ny rafi-pitabatabana . Manimba ny atidoha, ny atiny, ny voa ary ny ra. Ny fifandraisana mivantana amin'ny mekanika elemental (fluid) dia mety miteraka fanodinkodinana sy fanodinana simika. Ny singa dia misy fiantraikany amin'ny taovam-pananahana ary mety hanimba ny foetus. Ny vokatra sasany amin'ny fifindrana merkiora dia mety ho eo no ho eo, fa ny vokatry ny voan'ny merkiora koa dia mety tsy ho tapaka. Mety misy vokany eo no ho eo ny vokany dia mety ho voan'ny tsindry, habibiana, fitsaboana gripona, fandoroana na fimamoana, hoditra na clammy hoditra, fahasosorana, ary tsy fahasalamana. Maro ireo soritr'aretina hafa, arakaraka ny làlana sy ny faharetan'ny fanasitranana.
Inona no hatao raha mijery Mercury ianao
Ny fihetsika tsara indrindra dia ny mikaroka fitsaboana avy hatrany, eny fa na dia mahatsapa tsara aza ianao ary tsy mahatsapa ny vokatra mahatsikaiky. Ny fitsaboana fohy dia mety hanala mèkioka avy amin'ny rafitrao, mba hisorohana ny fahavoazana sasany. Ankoatra izany, tadidio fa mety hisy fiantraikany eo amin'ny toe-tsainao ny hormona, ka aza mieritreritra hoe marina ny fanombantombanana ny fahasalamanao.
Tsara ny manontany amin'ny Poison Control na mijery ny dokotera.
Mercury voalohany fanampiana
Raha mividy moka amin'ny hoditrao ianao dia mitadiava fomba fitsaboana ary araho torohevitra matihanina. Esory ny fitafiana maloto ary hodi-maso amin'ny rano mandritra ny 15 minitra mba hanesorana faran'izay milevina araka izay tratra. Raha miala amin'ny fivalanana ny olona iray miboridana, ampiasao kitapo sy saron-tava mba hanomezana azy ireo ny rivotra, fa aza manasitrana ny fiterahana amin'ny vava, satria io dia manimba ny mpamonjy koa.
Fomba hanadiovana lalao Mercury
Aza mampiasa vakso na kifafa, satria manimba ny fitaovana izany ary manaparitaka kokoa ny moka noho ny tsy fanaovana na inona na inona! Aza atao tsinontsinoavina koa ny fivoahana na atsipazo ao anaty fako. Azonao ampiasaina ny taratasy matevina hentitra mba hanosehana ny trosan'ny mercury mba hamolavola drafitra lehibe kokoa ary avy eo manosotra ny iray amin'ny fampiasana tsindrona iray na manosika azy ao anaty siny iray izay azonao fehezina amin'ny takelaka iray. Ny solfara na ny zinc dia azo alefa amin'ny mercury mba hamorona amalgam, mampifamatotra ny merkiora ho lasa endrika tsy misy dikany.
Mercury, Fisher Scientific Safety Data Sheet, nalaina tamin'ny 5 Aogositra 2013.
McFarland, RB, ary Reigel, H (1978). "Ny Mercury Kiritika dia Mampijaly Avy Any Am-bolana". J. Occup. Med. 20 (8): 532.
Toe-karena momba ny fahasalamana momba ny tontolo iainana 1: Mercury. Geneva: Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. 1976. ISBN 92-4-154061-3.
Mercury: Fandrobana, fialofana ary fanadiovana ny tranokala. "Ny Masoivoho momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny 5 Aogositra 2013.
Inona no atao hoe Pitchblende? (Uraninite)
Inona no atao hoe boson?
Tombontsoa manokana momba an'i Neil deGrasse Tyson
Ny fahasamihafana eo amin'ny cation sy ny anion
Ahoana ny fametrahana fitaovana fanariana fako
Fanandramana momba ny cheminiana manomboka amin'ny taratasy A
Fomba fakana test
Aiza no misy hery matanjaka ao amin'ny Magneto?
Mountain Biomes: Fiainana Any An-Danitra
Panisialy ara-bola tamin'ny taonjato faha-19
Inona no atao hoe mpanorina trano?
Famaritana ny anarana sy ny orinasa CUNNINGHAM
Ny Cómo el divorcio dia afaka mamela ny sarin'ny trano (karatra maitso)
Ahoana ny fomba fampiasana ny fanehoan-kevitra Frantsay amin'ny resadresaka
Fomba fakana raki-tsoratra ny Periodika
Ny tranoko an'i Yesteryear
Ny fomba fikarohana momba ny Fikarohana
Mampitsahatra ny tadio (Marka 4: 35-40)
Ny fitoviana eo amin'ny fivavahana sy ny filozofia
Lalàn'i Manu (Manava Dharma Shastra)
Flower Duet Lyrics sy Text Translation
Classic Rock Band: Famintinana ny tantaran'ny Pink Floyd
5 ny fahadisoana nataon'ireo mpikatroka mafàna fo dia nahatonga ny faharesen-dahatry ny olom-boafidy
Iza moa i Jesosy?
Sakafo, Asthma ary ny tsy fahasalamana
Anarana amin'ny sary an-tsary
Augustiana College (South Dakota) Admissions
Tanàna ambony indrindra eran-tany